Dzivisa kutora kubatwa neVagadziri vako | Martech Zone
Monday, May 12, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Vhiki rino ndakatanga hurukuro nemumwe muimbi weko anga achibatsira mukuru wake manejimendi enzvimbo dzinoverengeka dzekushandisa padandemutande rake.
Iyo hurukuro yakatora shanduko uye kumwe kubuda kwakapfuurira pamusoro pekubhadhara mari yevhiki nevhiki yekusimudzira vasina kuona kufambira mberi nemushanduri wavanenge vachishanda navo. Iye zvino mugadziri anoda kuvabhadharisa imwe mari yemubhadharo kuti vapedze chirongwa pamwe nemari yevhiki nevhiki yekugadzirisa zvimwe zvikumbiro. Zvinowedzera.
Iyo yekuvandudza yakaendesa mazita echizinda kuitira kuti agone kuvabata. Iyo yekuvandudza inogadzira zvakare kunyorera pane yake yekubata account. Muchidimbu, mugadziri ava kuvabata.
Nekutenda, mukadzi wandiri kushanda pamwe naye akarayira manejimendi kuwana munguva yakapfuura kugadzirisa mamwe emafaira etemplate ewebsite. Iyo yekuvandudza yaigona kunge yakamupa kushomeka kuwana asi haana. Iye (nousimbe) akamupa iye yekutungamira kupinda kune saiti. Manheru ano ini ndashandisa iko kuwana kusevha kodhi yese yeiyo saiti. Ndakafungawo kuti ndeipi manejimendi software yaaishandisa uye ndokuita nzira yangu kune dhatabhesi manejimendi kwandakakwanisa kuendesa ese maapplication 'data uye tafura zvimiro. Who.
Iye muridzi anga achironga kutamisa iwo masosi kuenda kumazita matsva emazita kana budiriro yapera. Izvo zvakakura nekuti zvinoreva kuti domains dzazvino dzinogona kupera muchiitiko chekuti paine kupatsanurwa kwehasha pakati pemugadziri nekambani. Ndakaona izvi zvichiitika kare.
Mamwe matipi kana iwe uchizowana timu yekunze yekuvandudza:
Nyoresa mazita ako echizinda muzita rekambani yako. Hazvina kuipa kuti mugadziri wako seTechnical Contact paaccount, asi haana chinjana muridzi wedomeini kune chero munhu asiri kunze kwekambani yako.
Kubata Chishandiso chako kana Saiti
Izvo zvakanaka kuti mushambadzi wako angave nekambani yekutambira uye anogona kukuisira yako saiti, asi usazviite. Pane kudaro, bvunza mazano ake ekuti ungagashira sei kunyorera. Ichokwadi kuti vagadziri vanoziva manejimendi manejimendi, shanduro, uye nzvimbo yezviwanikwa uye izvo zvinogona kubatsira kuti chigadzirwa chako chipedziswe nekukurumidza. Izvo zvakati, hazvo, ive yako account yekubatira uye wedzera mushambadzi wako neyake yekupinda uye yekuwana. Nenzira iyi, unogona kudhonza ipulagi pese paunoda.
Ive wega Code
Usafunge kuti ndeyako kodhi, isa pakunyora. Kana iwe usiri kuda wako wekuvandudza achishandisa mhinduro dzawakamubhadharira iye kuti agadzirise kumwe kunhu, iwe unofanirwa kusarudza kuti panguva yechibvumirano. Ini ndakagadzira mhinduro nenzira iyi asi ini ndakagadzirawo kwandinochengeta kodzero yekodhi. Mune ino yekupedzisira kesi, ndakataurirana nezve mutengo wechikumbiro wakaderera kuti pave nechikurudziro kukambani kuti indipe kodzero. Kana iwe usina hanya neako mushambadzi uchishandisa kodhi yako kumwe kunhu, saka haufanire kunge uchibhadhara mari yepamusoro!
Tora wechipiri pfungwa!
Hazvikuvadze manzwiro angu kana vanhu vandiudza kuti vari kutora mabheji kana kutaurirana nevamwe vanyanzvi. Muchokwadi, ndinorikurudzira!
Chinokosha ndechekuti urikubhadhara tarenda rako rekuvandudza asi iwe unofanirwa kuchengetedza kutonga uye kuve muridzi pane iro zano. Ndezvako. Ndiwe wakaisa mari mairi, iwe wakakanganisa bhizinesi rako uye purofiti yacho ... uye ndiwe unofanirwa kuichengeta. Vagadziri vanogona kutsiviwa uye izvo hazvimbofanirwe kuisa kunyorera, kana zvakanyanya - bhizinesi rako, panjodzi.
Tags: adverjackingMAKARALI USBgoogle algorithmmobile smsprwebmameseji kushambadzirakutumira mamesejiWordpress sms yekubatanidza
Chengeta Zvemukati Zvako Zvitsva! Kusanganisira Makomendi
May 13, 2008 pa 5: 04 PM
Ini ndiri webhu dhizaini uye ndinobvumirana nezvakawanda zvemapoinzi ako (pamwe ese) asi ndinoda tsananguro pa#3.
Kudhindisa kwekutengesa kwesaiti kana chikumbiro chinotengeswa kune imwe kambani (kana zvakanyanya mukwikwidzi) hazvina kunaka uye zvinofanirwa kugara zvichitaurwa sezvisingagamuchirwe mukondirakiti yako. Nekudaro, ini ndakagadzira mhinduro dzehunyanzvi kumatambudziko akajairika ndichishanda muprojekiti yemutengi iyo isina chekuita nebiz yavo uye haimiriri chikamu chakakosha chemhinduro yese.
Mutengi aida peji peji uye kudzora nhanho yemunda zvakasungirirwa kune mabasa emushandisi. Iyo "kunze kwebhokisi" mashandiro eASP.Net anoita maforodha level mvumo. Saka ndakawedzera mvumo dzemuno dze .Net uye ndakaendesa mhinduro sechikamu chesewese web application.
Ndinotenda kuti vane kodzero yekodhesi yese (sezvataurwa mukondirakiti) asi ndinonzwa ndakakodzera kushandisa nzira imwechete uye chunks yekodhi kuzadzisa iyi yekuwedzera pamapurojekiti emangwana.
Izvi ndakazviita ndichirimwa nekambani yemaconsulting. Ko kambani yekubvunzurudza ingave nekodzero here mumaonero ako kudzokera uye kukopa mhinduro iyoyo, vachiishambadza seyavo?
Aug 18, 2011 na6:24 PM
Ndinofunga tinobvumirana. Pfungwa yangu mune izvi ndeyekuona kuti une kodhi uye unogona kubuda kunze kwemukova nayo. Kana mugadzirisi wako ari kukugadzirira kodhi uye achiisundira kunze kune yako saiti - iwe hauna iyo kodhi. Ndakaona izvi zvichiitika nezvese kubva kumifananidzo, Flash, .NET, Java… chero chinhu chinoda faira rekwakabva uye chinobuda.
May 13, 2008 pa 5: 53 PM
Ndiri kuona kwaunobva uye ini ndisingabvumirani nezvose 100% (ndine mapako), makambani anofanirwa kugara achifunga izvi.
1. CHOKWADI. Haikwanise kusimbisa izvi zvakakwana. Ndakamboshandira kambani diki yakaita izvi uye ndainzwa ndine mhosva pamusoro pekubatanidzwa. Ndiri kufara kuti ndakwanisa kubuda imomo. Vatengi vanofanirwa kuchengetedza zvachose kutonga kwemadomasi avo. Kana vaine mumwe munhu anoziva zvakakwana, usape mugadziri mukana kune izvi. Kana zvisina kudaro, ita shuwa kuti mugadziri ane nzira yekuti iwe uchinje info / kuendesa iyo dura kuburikidza nemutengesi interface yeimwe mhando mune zvishoma.
2. Ndingabvumirana neizvi asi zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Kana iwe uri kutumira iri nyore PHP app uye uchida yakaderera mutengo wekutambira, nenzira dzese, tora LunarPages kana DreamHost account kana chimwe chinhu woirasa ipapo. Ipa mugadziri mukana. Nekudaro, yakaderera-mutengo wakagovaniswa yekutambira zvirokwazvo ine zvimhingamupinyi zvayo… kunyanya kuzvinhu zvikuru. Asi kana iwe wakakura zvakakwana kuti uzvidye mwoyo pamusoro peizvozvo iwe unofanirwa kuve nemumwe munhu wehunyanzvi pane vashandi vanogona kubata nazvo. Zvakawanda zviri pachena nezve kuvimbana. Chokwadi segehena kuisa chimwe chinhu muchibvumirano kana uchikwanisa nezverudzi urwu rwechinhu (zvirambidzo uye zvakadaro). Yechitatu bato yekutambira yakanaka kana mugadziri asingadi kuita chero chinhu chinoshamisira. Ndinobvuma kuti ndabvarurwa nekuti inyaya yemamiriro ezvinhu. Izvo zvinoenderanawo nehukuru hwesaiti, ruzhinji rwetekinoroji inoshandiswa. Kana ichave yakakura, uchifunga nezvekuhaya munhu pavashandi. Kwete nguva dzose sarudzo, asi yakachengeteka kune zvinhu zvikuru.
3. Ichi chinhu zvakare chakaitwa nekambani yangu yekare. Unogona kubva, ivo vanokupa iyo HTML, mifananidzo nezvimwe…. asi hapana code. Kodhi yacho yaive sevhisi yakarenda. Izvo zvichitaurwa, pane kuva nekuvanzika. Ndagara ndichiita zvekutengesa zvisiri zvega. Chaizvoizvo, ini ndinofanira kukwanisa kushandisazve zvinhu zvangu. Ini handina nyaya nemutengi ari muridzi wayo, kuita zvavanoda nayo uye kuita kuti mumwe munhu ashande pazviri pasi… asi ini handisi kuzozvikweretesa uye ndinofanira kudzorera vhiri nguva dzese.
4. Nguva dzose. Nguva dzose. Nguva dzose.
May 18, 2008 pa 5: 48 PM
Yakanaka post… wakaita zvakanaka kunyangwe ini ndisingabvumirani nechinhu chimwe (#2):
"Zvakanaka kuti mugadziri wako anogona kunge aine kambani inotambira uye anogona kukugadzirira saiti yako, asi usazviita."
Kunyangwe ini ndichinzwisisa pfungwa iri kumashure kweizvi, inogona kupesana-inogadzira mune dzimwe nguva kuraira kuti chirongwa chako chiitwe kumwe kunhu. Kana iyo kambani inogadzira saiti yako kana app iine chikuva chekutambira chavanoda kushandisa, mukana wekuti ichave inoshanda uye inobudirira kuti vashandise.
Pamusoro pezvo, kubva pamaonero ehuzivi, kana ukaramba kushandisa chikuva chemugadziri wako nekuti haudi “kubatwa senhapwa”, zvino izvi zvinoisa toni yekusavimba kubva pakutanga. Kana iwe usinganyatsovimbi nemugadziri wako zvakakwana kuti atore navo, saka unoda chaizvo kunge uchishanda navo pakutanga?
Ndinoziva kuti nyaya dzakawanda dzinotyisa dziriko nezvemhando iyi yemamiriro ezvinhu, asi kazhinji ndingakurudzira kuti utarise kutsvaga mugadziri waunovimba naye. Iwe unogona kushandisa dhizaini yako yekutambira uye uchiri kuzvidzivirira nekukumbira mukana wekutonga uye kugadzira yako backups.
Zvekare, yakanaka post uye ruzivo rwakakosha.
May 19, 2008 pa 8: 56 AM
Inogona kuita senge nyaya yekuvimba asi ini handifunge kuti ndiyo - inyaya yekutonga uye mutoro. Kana iwe uchizoisa mari yakawanda mukuvandudza webhusaiti yako, saka unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unokwanisa kudzora nharaunda yayo.
Zvinhu zvinoitika mubhizinesi zvinoputsa hukama uye hazvifanirwe kuve zvakashata. Zvichida mugadziri wako/femu inowana mutengi akakura kwazvo uye haakwanise kukupa nguva yacho. Zvichida vanochinja zvinangwa zvebhizinesi. Dzimwe nguva kambani yavo yekutambira inogona kuva nematambudziko.
Ndiri kukurudzira kuti udzore uye uve nehanya nekugamuchira kwako kuitira kuti ugone kuvimba nemugadziri wako pane zvaari kuita - kusimudzira!
Ndinotenda kudzosera kumashure, Michael.
Aug 19, 2011 pa 12: 43 AM
Ini zvakare ndiri mugadziri wewebhu app, uye ndinofunga warovera mbambo mumusoro. Dzimwe pfungwa:
Ini ndinofunga vazhinji vese vangabvuma (uye zvinoenderana nezvakataurwa pazasi) #1 ndeye mhedziso. Usambofa wakazviita. Ever. Chero mamiriro ezvinhu.
Ndine kutora kwakasiyana pa #2 pane pamwe vamwe vandinoshanda navo vanogadzira: isu tinoramba kugamuchira chigadzirwa chekupedzisira chevatengi vedu (zvechokwadi, isu tinotambira sevha yekuyedza yevatengi kuti vaedze kutyaira chigadzirwa panguva yekusimudzira). Isu tinofara kubatsira vatengi kuti vagadzirise kuti vazvigadzirire ivo pachavo kana kutsvaga mupi wekutambira. Isu hatisi kuda kupinda mubhizinesi rekugamuchira. Kana zvichireva kudzima basa, ngazvive zvakadaro. Kune akawanda makuru makuru ekutambira makambani kana mafemu ezvivakwa kunze uko pane anogona kupa iyi sevhisi nemutengo wakachipa. Isu tinokurudzira kutakurika kwebasa redu, uye tichaita chero chatinogona kubatsira kuti riitwe, kunyangwe mutengi achichinja vanopa vanopa makore munzira.
Ye#3, vatengi vedu vanowana ese mabviro kodhi yechigadzirwa chekupedzisira nebako rimwechete: Zvezvigadzirwa zvechitatu-bato zvinoshandiswa mukugadzirisa (senge web controls kubva kuTelerik kana Chikamu Chekutanga), tinogona kupa mutengi iyo yakaunganidzwa dll ye. chechitatu chekutonga (taura grid). Zvibvumirano zvedu zverezinesi nemakambani echitatu (atinopa kune mutengi) zvinotirambidza kugovera kodhi kodhi yemhando idzo dzekutonga, nekuti ipfuma yevechitatu mapato, kwete yedu. Iko kushandiswa kwemhando idzi dzezvigadzirwa kunochengetedza nguva yekusimudzira kune mutengi uye yakachipa zvakanyanya pane kuvaka mashandiro akafanana kubva pakutanga. Isu tiri kumberi nezvegwaro iri risati raitwa chero basa. Ehe, kana mutengi achishuvira kubhadhara kuvandudza kwekutonga kwetsika (panzvimbo yekushandisa chigadzirwa chakafanovakwa kubva kune wechitatu bato) isu tinopa iyo sosi kodhi yeiyo tsika kutonga pamwe nezvimwe zvese.
Kana zvasvika pakushandisazve kodhi, isu tiri pamberi pamusoro penyaya yekuti isu tinogona kushandisazve zvikamu zvekodhi kunze kwekunge yakanyatsogadzirwa kuti ishandiswe nemutengi (taura nezve bhizinesi revaridzi) risati raitwa chero basa. Kana mutengi achida kuve neyakasarudzika kodhi yakagadziriswa hongu, iyo inowanikwa kwavari.
Sezvakataurwa nevamwe, #4 inogara ichikurudzirwa. Nguva dzose!